शेखरले किन पाएनन् भाइबहिनीकै साथ ? खुल्यो बेग्लै रहस्य — Imandarmedia.com
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन आउनु चार महिनाअघि डा. शशांक कोइराला, शेखर कोइराला र सुजाता कोइराला एकैठाउँ भेला भएर लञ्च मिटिङ गरे। तत्कालीन रामचन्द्र पौडेल समूहमा,
तर पछिल्लो ५ वर्ष समूहको नेतृत्व गरेका रामचन्द्र पौडेलको साथ, प्रकाशमान सिंहको छुट्टै उम्मेदवार अनि, भाइ र बहिनीको असहयोगका बाबजुद शेखरले ४० प्रतिशत मत पाएका छन्। र त्यही मतको बलमा नेताका रुपमा उदाएका छन्।